Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Saint Vincent sy ny Grenadines vaovao momba ny dia » Ny MAP International dia mbola manohy mandefa fanampiana ho an'ireo niharan'ny fipoahan'ny volkano La Soufrière any St.Vincent
Ny fipoahana volkano an'i St.Vincent La Soufrière dia nitranga tamin'ny 9 aprily, nanery olona 20,000 XNUMX hiala, ary namela olona an'arivony natory tao amin'ny toeram-pialofana vonjy maika
Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana ny MAP International izay ny iraka dia ny hanome fanafody sy famatsiana ara-pahasalamana ho an'ireo mponina marefo indrindra eto an-tany
MAP International dia manomana kaontenera 40ft feno fanafody, kojakoja, sivana rano, Liquid IV, otrikaina, lamba firakotra ary vokatra fidiovana.
Ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka sy mpamatsy vola dia mahatonga ny MAP hahomby amin'ny ezaka vonjy voina ataon'izy ireo
MAP International, fikambanana iray manerantany momba ny fahasalamana izay ny iraka dia ny hanome fanafody sy famatsiana ara-pahasalamana ho an'ireo vahoaka marefo indrindra eto an-tany, dia manohy ny valin'ny vonjy voina ho fanampiana ireo niharan'ny fipoahan'ny volkano St.Vincent La Soufrière nitranga tamin'ny 9 aprily, nanery olona 20,000 hamindra toerana, ary hamela ny mponina an'arivony hatory amin'ny toeram-pialofana vonjy taitra.
MAP Iraisam-pirenena Niara-niasa tamin'ny Food For The Poor tamin'ny voalohany mba handefa kitapo 1,000 15 momba ny fahasalamana (DHK) ho any St. Lucia ho fanampiana vonjy maika ho an'ireo evacuees St. Vincent. Amin'ny herinandro manaraka, hanohy ny ezaka fanampiana ny loza ny fikambanana. Tombanana ho XNUMX isan-jaton'ny mponina ao amin'ny nosy no mijanona ao amin'ny fialofana vonjimaika. Ny DHK an'ny MAP International dia manohana olona iray mipetraka amin'ny fialofana mandritra ny herinandro iray. Ny DHK dia misy famafana antiseptika, savony, nify, borosy nify ary zavatra ilaina hafa.
Johnson sy Johnson Family of Companies niaraka niasa tamin'ny Johnson and Johnson Foundation, mpiara-miasa efa hatry ny ela an'ny MAP International, dia nanolotra fanomezana 20 J&J Medical Mission Packs ho fanampiana ireo traboina voa. Ny tsirairay amin'ireo fonosana ireo dia misy fifangaroan'ny vokatra ho an'ny mpanjifa sy kojakoja ara-pahasalamana, toy ny sarontava, vahaolana amin'ny rehidration am-bava, analgesika ary vitamina ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe.
MAP International dia manomana kaontenera 40ft feno fanafody, kojakoja ara-pahasalamana, sivan-drano, Liquid IV, fiarovan-doha fiarovana, akanjo fiarovana, otrikaina, lamba firakotra ary vokatra fidiovana. DHK fanampiny dia halefa any St.Vincent miaraka amin'ny mpiara-miasa MAP International.
Ho fanampin'ireto fiaraha-miasa ireto dia nanampy ny MAP International ny mpiasan'ny Edwards Lifesciences tamin'ny alàlan'ny famonosana DHK mba halefa mivantana any amin'ny World Pediatric Project, iray amin'ireo mpiara-miombon'antoka MAP eny an-kianjan'ny St.Vincent. Tetikasa World Pediatric dia manolo-tena amin'ny fanohanana ny ankizy sy ny fianakavian'i St.Vincent sy ny Grenadines.
Jodi Allison, ny filoha lefitry ny Global Giving an'ny MAP International, dia nilaza fa ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miasa sy mpamatsy vola no mahomby amin'ny MAP amin'ny ezaka vonjy voina ataon'izy ireo. “Ny fiaraha-miasa - na orinasa lehibe, orinasam-panompoana eto an-toerana, na fiangonana eo an-toerana - no lakilen'ny MAP afaka mahatratra olona betsaka toa antsika. Ny vavakay dia miaraka amin'ireo sisa tavela amin'ny fipoahan'ny volkano La Soufrière ary manolo-tena izahay hanohy izany fiaraha-miasa izany amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay handefa fanampiana ho an'ireo izay tratry ny fahasimbana tany St.Vincent. ”